URomeo ucela ukuthi abakhanyisele kukho konke uMadisha ongasekho - Impempe
URomeo ucela ukuthi abakhanyisele kukho konke uMadisha ongasekho
February 4, 2021 Impempe.com
UKermit Erasmus ucelela iMamelodi Sundowns izinhlanhla kuMotjeka Madisha ongasekho
Umgadli weMamelodi Sundowns, uKermit Romeo Erasmus, ucele uMotjeka Madisha ongasekho ukuba abe yidlozi elihle emndenini wakhe nakukona konke okuthinta amaBrazilians.
Ukusho lokhu u-Ersamus ngoLwesine lapho iSundowns ibivakashele khona umndeni wakwaMadisha njengoba ibingeke ibe yingxenye yenkonzo yesikhumbuzo ebikhona izolo eZebediela, eLimpopo.
IDowns ibiyobhonga emswaneni kusukela kuvele isiqiniseko ngolibofuzo (DNA) ukuthi ngempela uMotjeka ubeyingxenye yengozi yomgwaqo eyenzeke ngoDisemba ngasekomkhulu leSundowns, iChloorkop.
Uzofihlwa ngoMgqibelo lapho bonke abadlali nethimba labaqeqeshi lizobe likhona kwazise (iSundowns ayinamdlalo ngoMgqibelo).
“Sizokhumbuza umndeni wakwaMadisha ukuthi awuwodwa kulesi sikhathi esinzima obhekene naso. Ubesewumfowethu yize ngidlale naye isikhathi esincane.
“Kubuhlungu kithina sonke kodwa sinethemba lokuthi naye umfwethu (uMadisha) uyasibona siphithizela egcekeni lakubo futhi kuyamjabulisa lokho.
“Sizozama nje ukubopha amanxeba kepha siyazi ukuthi kunzima kangakanani ngoba nathi sisesimeni esifana ncamashi.
“Kubuhlungu kodwa siyacela umfwethu abe yingelosi enhle ekhaya kanjalo nakithina nakho konke esizama ukukwenza kwiSumdowns,”usho kanje lo mgadli othe bekuwumsebenzi wakhe noMadisha ukudidisa izitobha uma kushaywa amakhona.
“Ngingasho nje ukuthi yikhona lokho obekusixhumanise kakhulu kodwa okwenze sazwana ngokushesha yindlela yakhe yokuziphatha. Ubehlonipha wonke umuntu futhi ubehlala ezihlekela. UMadisha ubekuhleka ngisho ungowangakubo uma ujikiwe,” kulandisa u-Erasmus.
Isalokhu iqhubeke njalo nokuvula igebe esicongweni iSundowns njengoba selingamaphuzu amahlanu koyilandelayo. Kwenzeka konke lokhu nje, nakwiNedbank Cup idlulele esigabeni esilandelayo yize ititshiliswe iStellenbosch kwashunqa uthuli. Umdlalo ugcine uphele ngo 3-2 esikhathini esengeziwe.
Previous Previous post: Uyabubula uBarker ophoxwe yiSundowns esethembile koweNedbank Cup
Next Next post: Isidinga izibuko manje eyokubhacaza konompempe kwiPSL